Ahoana ny fanaovana sary an-kalalahana amin'ny Word ary manampy fanoharana ao amin'ny antontan-taratasy | Famoronana an-tserasera
Ny kinova farany an'ny Word dia misy fitaovana maro izay hanampy anao hampanan-karena ny antontan-taratasinao amin'ny fanampiana sary sy fanoharana. Ny fampiasana azy ireo dia tena tsotra ary, rehefa mianatra mitantana azy ireo ianao dia ho hitanao fa izy ireo mpiara-dia lehibe hamorona lahatsoratra manintona kokoa ary mora kokoa aza ny mahazo azy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantariko anao ireo fitaovana fanaovana sary lehibe izay atolotry ny Word ary homeko torolàlana vitsivitsy ianao mba hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'izany. Raha te hahalala sary ny Word ianao dia aza adino ity lahatsoratra ity!
1 Fitaovana fanaovana sary
2 Fitaovana modely 3D
3 Fitaovana endrika
4 Sary famantarana fitaovana
Io fitaovana Word io dia mamela manaova sary maimaim-poana amin'ny fomba tsotra. Manolotra ny fahafaha-manao kapoka amin'ny alàlan'ny fivezivezena mivantana ny rantsan-tànanao eo amin'ny tontonana mikasika ny solosaina, mampihetsika ny safidy «manao sary miaraka amin'ny tontonana». Tombony lehibe iray hafa koa ny famindrana ny dian-kapoka sy ny fanovana azy.
endri-javatra karazana borosy telo: penina, pensilihazo ary fanamafisam-peo (na hazavana). Ny fanamboarana ny penina rehetra dia azo ovaina, manova: habe sy loko. Raha manome ianao hanampiana pensilihazo, dia azonao atao ny manampy borosy vaovao ary mamorona paleta miaraka amin'ireo izay ampiasainao indrindra. Ilaina tokoa ity fitaovana ity amin'ny fanamafisana ny naoty sy ny fanasongadinana ny ampahany amin'ny lahatsoratra.
Fitaovana modely 3D
Miaraka amin'ny Teny azonao atao ny mampiditra sary 3D efa natao ho an'ny antontan-taratasinao. Mba hanaovana izany dia mila manindry fotsiny ianao ampidiro> maodely 3D. Araka ny ho hitanao dia manana karazany maro isafidianana ianao, azonao atao ny misafidy iray na maromaro isaky ny mandeha ary amin'ny fipihana eo amin'ny sisiny dia azonao ampiana azy ireo ilay pejy.
Ny fampidirana azy ireo ao amin'ny lahatsoratrao sy naotyo dia hevitra lehibe, indrindra raha miresaka zavatra sarotra eritreretina ianao raha tsy mahita azy (ohatra, raha milazalaza ny firafitry ny lithosfera ianao na raha manazava ny ny ampahany amin'ny sela dia epithelial).
Ny fanaovana sary singa sasany freehand dia mety ho fitsapana, vao mainka aza raha toa ahy, tsy dia manana fahaiza-manao sary firy ianao. Manolotra ny mety hampiditra endrika banga ao anaty lahatsoratrao. Amin'ny fipihana eo ampidiro> endrika hahazo katalaogy malalaka ianao. Azonao atao ny mamorona amin'ny endrika geometrika mahazatra, endrika sarotra kokoa ary koa zana-tsipìka izay tena ilaina rehefa manondro ny ampahany amin'ny antontan-taratasinao.
Sary famantarana fitaovana
Tena mitovy amin'ny fitaovana fampiasa izy io, na dia miovaova aza ny katalaogy atolony, Afaka mahita sary masina ianao saika amin'ny zava-drehetra! Raha te hahita azy ireo mora kokoa ianao dia afaka mampiasa ny motera fikarohana.
Mba hidirana amin'ny kisary Word, dia mila tsindrio fotsiny ampidiro> sary masina, safidio ny tianao avy amin'ny katalaogy izay hiseho eo ankavanana sy manao Click en Mampidira.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Fomba fanaovana sary maimaimpoana amin'ny Word ary manampy fanoharana amin'ny rakitrao